Soosaaraha mashiinka sooshada yaanyada sifeeya otomaatiga ugu fiican soo saaraha iyo alaab-qeybiye | GAOGE
Mashiinka Xirmada Suugada Yaanyo otomaatiga ah otomaatiga ah
Mashiinka wax lagu baakadeeyo ketchup-ka wuxuu yaqiinsan karaa habab kala duwan oo wax lagu xiro sida dib u shaabaynta, seddex geesood oo wax lagu xidho iyo afar dhinac wax lagu xidho, taas oo buuxin karta shuruudaha macaamiisha kala duwan.
Qalabka qiyaasta dareerayaasha waa aalado madax-bannaan, kuwaas oo sida caadiga ah lagu rakibo mashiinnada wax lagu baakadeeyo oo lala shaqeeyo iyaga. Shaqada ugu weyn ee qalabka qiyaasta daawada ayaa ah kala soocida badeecada oo lagu qiyaaso qiyaaso horay loo sii qeexay, oo ay dejiyaan howlwadeenka mashiinka. Qiyaasta diyaarka ah ayaa markaa lagu quudiyaa mashiinnada wax lagu baakadeeyo.
Habka shaqada ee qalabka dawada ee dareerayaasha:
Qalabka qiyaasta dareerayaasha waa noocyo kala duwan oo qiyaasta qiyaasta qiyaasta, halkaas oo qiyaasta lagu sameeyo iyadoo la adeegsanayo biston. Guud ahaan, aaladda daawada waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo waaweyn - bakhaar qaadasho, sanduuqa waalka iyo bistoolad. Nidaamka qiyaasta daawadu wuxuu ku socdaa cawaaqibka soo socda:
1. Ku shubista bistoolada alaabta
2. Qaadashada mugga alaabta la soo raray
Hawlgalkan waxaa dhexdhexaadinaya sanduuqa waalka (qaybiyaha), kaas oo ka beddelaya qaab lagu rakibo bistoolada una beddelo qaab lagu qiyaaso culeyska alaabta la soo raray. Qaddarka qiyaasta waxaa lagu xakamayn karaa iyadoo la beddelayo xawaaraha piston-ka.
Wixii buuxinta cabitaannada, dhejiska, boomaatada, Sibidhka ay piston waddo si loo xakameeyo mugga. Dareeraha quudinta nus-otomaatiga ah ee leh badeecada baydalka ama saacad otomaatig ah; sidoo kale waxaa lala jaanqaadi karaa mashiin kale oo baakidh otomaatig ah oo ah qaddarka qiyaasta dareeraha kala duwan.
Horizontal dual heads piston filler for free-qulqulaya dareeraha, sida biyaha macdanta, saliidda la cuni karo, casiirka, khad, saabuunta dawada, cadarka, dareeraha dareeraha ah, sida ketchup, majones, kareemka, subagga, macaanka, malab, shaambo, iwm.
Cuntada iyo dawooyinka S / S 316 qaybaha xidhiidhka birta ah ee birta ah.
Heerka leh koronto xakamaynta korontada, waxaan leenahay waalka soodhaweynta hawada oo shaqeynaya iyada oo aan lahayn ikhtiyaar koronto oo buuxa Pneumatic Driven
• Naqshad fudud, nadiif ah oo adag
• Been abuur & isku-duubni
• Soo noqoshada dhaqsaha leh ee maalgashiga
• 7 ”Way fududahay in la isticmaalo shaashadda Taabashada
• Shaqada ay maamusho PLC
Suumanka jiidaya ee gacanta lagu hayo
• Shaabad xariijimo oo Servo maamusho
• Maaraynta heerkulka dijitaalka ah
• 1 gabal oo sameysmaya isku xidhka qoorta
• Iswaafajinta suumanka jiidaya
• Dareeraha sawirka ee diiwaangelinta calaamadaha daabacan
• Qiyaasta dhererka bacda ee Encoder
• Isku-darka isku-xidhka qalabka aan qalabku ku badnayn ayaa is beddelay
• Isku dhejinta shaabad dhab ah
• Iswaafajinta samaynta isku xidhka qoorta
• Helitaanka 360-degree dayactirka
• Beddelista suunka dhaqsaha iyo fudud
• Ka saar qaybaha dayactirka shelf
• Beddelka fudud ee qaybaha duugga & jeexjeexa
Hore: Mashiinka Xirmooyinka Mayonnaise - Mashiinka Xirmooyinka dareeraha ah ee lagu buuxiyo Bastooladda
Xiga: Foomka dareeraha ah ee dareeraha ah iyo mashiinka shaabad - Qalabka baakadaha cuntada
Mashiinka Baakadaha Suugada Salad otomaatiga ah
Mashiinka Buuxinta Boorsada Oyster Premade Foojarka iyo ...
Dharka otomaatiga ah, Saliidaha, iyo Suugada toosan ...
Mashiinka Automatic Sisinta Rotary Mashiinka Mashiinka P ...